Thursday July 14, 2016 - 12:23:29 in Wararka by Super Admin
Ugu yaraan Afar katirsan gaadiidka dagaalka ciidanka Kenya oo laba kamid ah yihiin kuwa gaashaaman ayaa lagu gubay weerarka dhabagalka ah oo ka dhacay deegaanka Taabto.
Video Muuqaal ah oo lagu baahiyay baraha Internet-ka waxaa kasoo muuqanayay ciidamada Xarakada Al Shabaab oo la wareegaya Afar gaari qaarkoodna gubaya.
Meydadka ciidamo Kenyaan ah ayaa kasoo muuqanaya Video-ga iyo dagaalyahanada Al Shabaab oo gacanta ku dhigaya gaadiid xamuul ah oo hub iyo saad melleteriga saaranyihiin.
Weerarka oo ahaa mid gaadma ah wuxuu dhacay 15,May,2016 xiligaasi ayay Al Shabaab guulo ka sheegatay balse dowladda Kenya ayaa dhankeeda dacaayad been ah faafisay oo warsaxaafadeed ku sheegtay in 21 dagaalyahan ay ka dishay Al Shabaab gaadiidka ka burburisay.
Filimkan cusub wuxuu banaanka soo dhigayaa khasaaraha lixaadka leh ee melleteriga Kenya gaaray iyadoona gaadiidka KDF uu ugacan gelayo ciidamada Al Shabaab.
Sheegashada guulaha madaxda dowladda Kenya ee warbaahinta iyo xaqiiqda taal meydaanka dagaalka ayaa ah kuwa kala fog marka si fiican loo daawado filimkan markale soo bandhigaya guul darrada gaartay ciidanka Kenya.
Weerarkii dhabagalka ahaa ee deegaanka Taabto ka dhacay Bishii May 2016 ayaa la rumeysanyahay in uu ahaa midkii ugu xooganaa oo ay la kulmaan ciidanka Kenya tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii Ceel-cadde ee dhacay Bishii Janaayo 2016.
Hoos Ka Daawo Video-ga ama Halkan Guji MP4